Dhacdooyinka soo socda - Booqo Hultsfred
Nu	Nu	 - 2022-07-06	6 July
Juun 30 markay tahay 19 galabnimo - 21: 00
Senior - Målilla GOIF FB, Ciyaar: Målilla GOIF A - SK Lojal (Qaybta 6 Vimmerby)
Beerta isboortiga	Atlantvägen 8, Målilla, Gobolka Kalmar
Ururinta: 19:00 pm
Luulyo 1 markay tahay 09 galabnimo - 17: 00	 noq
Luulyo 1 markay tahay 09 galabnimo - Luulyo 3 markay tahay 16 galabnimo
Målilla Cagafyada Korontada Todobaadka
Arena Skrotfrag	Skrotfrag Arena 1 ,, Målilla, Gobolka Kalmar
Bandhiga cagaf-cagaf ee ugu weyn Waqooyiga Yurub oo leh dhammaan madadaalada cagafyada! Waxaa jira dhoolatus cagaf cagaf ah, cagaf jiidis, isu soo bax cagaf cagaf, tartanka cagafyada iyo waxyaabo kale oo badan! Tigidhada, booqo shabakada ku lifaaqan. Barnaamijka 1 / 7-3 / 7 2022 Jimcaha 1 Luulyo 09.00
Luulyo 1 markay tahay 10 galabnimo - 12: 00
dhoola tuska cagaf
Beerta taariikhda Målilla	Hultsfredsvägen 22, Målilla, Gobolka Kalmar
Dhoolatuska cagaf cagaf ee beerta hooyo. Waxay ka bilaabataa qiyaastii. 10 ka yimid Målilla motorway oo yimaadaa beerta qiyaastii. 12. Xaflada waxaa lagu soo wada diyaariyaa adeega qaxwaha ee Målilla.
Luulyo 1 markay tahay 10 galabnimo - 12: 00	 noq
Dugsiga dabaasha xagaaga ee Kristinebergsbadet
Kristinebergsbadet	Hultsfredsvägen, Hultsfred
Dugsiga dabaasha xagaaga 28 Juun - 9 Luulyo Sannadkan waxaan yeelan doonnaa dugsi dabaasha xagaaga oo bannaanka ah oo ku yaal Kristinebergsbadet, Hultsfred iyo Hesjön, Målilla. Ku xaddidan meelaha. Bilaash si aad u ballansato qof kasta oo ah
Summeynta gudaha Kristinebergsbadet
Tijaabi xirfadaada dabaasha harada dhexdeeda! Juun 27 - Luulyo 1 saacada 10.30-12.00 macalin dabaasha oo ka socda Hagadal wuxuu joogi doonaa Kristinebergsbadet, Hultsfred. Markaa waxaad hore u baratay dabaasha
Dugsiga dabaasha xagaaga 27 Juun - 8 Luulyo Sannadkan waxaan ku yeelan doonnaa dugsi dabaasha xagaaga oo ku yaal Kristinebergsbadet, Hultsfred. Ku xaddidan meelaha. Bilaash in aad ballansato qof kasta oo dhashay 2016 iyo
Luulyo 1 markay tahay 13 galabnimo - 15: 30	 noq
Aqoon isweydaarsi xagaaga
Inta lagu jiro usbuuca 25, 26,27, aqoon-is-weydaarsiga xagaaga ee Virserums Konsthall wuxuu furan yahay hawlo cusub maalin kasta oo aad ka qayb qaadan karto. Maalinta oo dhan fasaxa, aqoon-is-weydaarsiga xagaaga wuxuu ka bilaabmaa halkaas oo aan ku tijaabinno waxyaabo kala duwan si wadajir ah
Luulyo 1 markay tahay 14 galabnimo - 15: 30	 noq
Hesjön	Meesha lagu maydho ee Hesjön, Målilla
Tijaabi xirfadaada dabaasha harada dhexdeeda! Juun 27 - Luulyo 1 saacada 14.00-15.30, macalin dabaasha ee Hagadal wuxuu joogi doonaa Hesjön, Målilla. Markaa waxaad hore u baratay dabaasha
Dugsiga dabaasha xagaaga ee Hesjön
Sannadkan waxaan ku yeelan doonnaa dugsiga dabaasha xagaaga ee Hesjön, Målilla. Ku xaddidan meelaha. Si bilaash ah loogu ballansado qof kasta oo dhashay 2016 iyo ka hor. Xataa adiga dibadda ku nool
Luulyo 2 markay tahay 08 galabnimo
Safarka baska ee Miliseum ee Skillingaryd iyo Rosarium ee Jönköping
Valhall	Stora Torget 2, Hultsfred, Gobolka Kalmar
Miliseumku wuxuu ka sheekeynayaa sheekada nolosha askariga ee kala qaybsantay iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada injineernimada. Rosenlund's Rosarium waxaa ku yaal ilaa 375 nooc oo ubaxyo ah iyo dhir kale oo badan. 150 karoon xubinta ururka, qiimaha
Luulyo 2 markay tahay 09 galabnimo - 15: 00	 noq
Suuqa xagaaga ee Skeppet ee Målilla
Markabka	Atlantvägen 2, Målilla, Gobolka Kalmar
Hadda waa waqtigii Sommarloppis ee Skeppet ee Målilla waxaan bilaabeynaa 4 / 6-22 at 09-15 iyo Sabti kasta ilaa Sebtembar. 100 karoon/ dhig miis u gaar ah. U adeegida, shiilan bolse, 50/50 bakhtiyaanasiib. Soo dhawoow
Luulyo 2 markay tahay 10 galabnimo - 13: 00	 noq
Suuqa dhogorta libaaxyada	Stora Aby, Rosenfors, Gobolka Kalmar
Luulyo 2 markay tahay 16 galabnimo - 21: 00
Dhaqso u bax ama Guriga tag # 2
Gagada diyaaradaha ee Hultsfred	Madaarka Hultsfred, Hultsfred, Degmada Kalmar
Scumball Iswidhan iyo Tag Degdega Motorevents waxay kugu casumayaan xamaasad baabuur ahaan madaarka Hultsfred. Waxaad ka qaybqaadan kartaa hawlo kala duwan oo kala duwan sida "kulanka baabuurta" ama haddii aad raadinayso dhiirigelin
Luulyo 2 markay tahay 19 galabnimo - 21: 00
Heesta fiidkii ee beerta xagaaga Klippan
Sommargården Klippan	Sjöstigen 22, Virserum, Gobolka Kalmar
Fiidkii heesaha Jaenette iyo Lennart Åkerlund oo u adeegaya waffles
Luulyo 2 markay tahay 19 galabnimo - 00: 00
Xafladii 50-60aadkii ee Hultsfred Folkets Park
Hultsfred folkets Park	Hultsfred Folkets Park, Hultsfred, Kalmar län
Goobta Stora Dans 20pm, Honeyboy Slim & The Bad Habits ayaa ku ciyaara. Kooxda ayaa ka timid Vetlanda / Malmö waxayna soo bandhigaan dhagaxooda iyo doorkooda ka soo baxay kontomeeyadii iyo
Luulyo 3 markay tahay 12 galabnimo - 14: 00
Mörlunda GIF - Fågelfors IF (Div 6 Oskarshamn Herr)
Garoonka ciyaaraha ee Lillesjö	Lillesjövägen, 570 84 Mörlunda, Mörlunda, Kalmar Län
Ururinta: 11:00 pm
Luulyo 3 markay tahay 14 galabnimo - 16: 00	 noq
Kafeega Axadda ee Kalvkätte
Beer Weyl	Beerta Kalvkätte, Hultsfred, gobolka Kalmar
Ku soo dhawoow kafateeriyada axada wakhtiyo raaxo leh. Kafeteeriyadu waxay bilaabataa 3da Luulyo markay tahay 14: 00-16: 00 oo soconaysa Axad kasta ilaa 14ka Ogosto. Waxaan u adeegnaa rootiga guriga lagu sameeyo iyo dabcan kafeega.
Luulyo 3 markay tahay 14 galabnimo - 17: 00
Waffle Axadaha guriga kafeega
Hultsfred Hembygdspark	Folkparksvägen 5, Hultsfred
Fadhiiso "Annersebo" oo ku taal suuqa Silverån ee Hulingen oo ku raaxayso waffle
Luulyo 3 markay tahay 16 galabnimo - 17: 00
Tiyaatarka leh Pettson iyo Findus
La hees Pettson iyo Findus Bandhig faneedka qoyska ee Sven Hedman iyo Fanny Wistrand. Tigidhada xadidan, pre-book phone 076-1083277 Ku soo dhawoow Skeppet i Målilla!
Luulyo 3 markay tahay 16 galabnimo - 17: 30
Sheekada Buzz Lightyear iyo khibradiisa ku wajahan infinity iyo wixii ka dambeeya. Laga bilaabo 15 sano (aan dib loo eegin) Dhererka: Unknown Language: Unknown Text Language: Unknown Genre: Animated film family
Luulyo 3 markay tahay 20 galabnimo
Filimka Elvis, Baz Luhrmann wuxuu uga sheekeynayaa sheekada xiddigta Rock'n'roll ee ugu caansan adduunka; Elvis Presley. Elvis waxay leedahay bandhiga shaleemada Iswidhishka ee Juun 29, 2022. Elvis waa qayb ka mid ah Biopass. Laga bilaabo 15 sano (aan dib loo eegin) Dhererka: Lama garanayo
Luulyo 4 markay tahay 10 galabnimo - 12: 00	 noq
Luulyo 4 markay tahay 13 galabnimo - 15: 00	 noq
Kulamada xagaaga ee maktabadda Virserum
Maktabada Virserum	Skolgatan 5, Virserum, Degmada Kalmar
Ku soo dhawoow kulanka xagaaga ee maktabada Virserum Kaalay oo wax samee. Waxaan haynaa qalin, waraaqo midab leh, dhejisyo iyo male-awaal firfircoon. 13-15
Luulyo 4 markay tahay 13 galabnimo - 15: 30	 noq
Luulyo 4 markay tahay 14 galabnimo - 15: 30	 noq
Luulyo 4 markay tahay 18 galabnimo
Tug hagitaan ah oo ku taal bannaanka Hultsfred
Thorbjörn Svahn iyo Katarina Genberg hagaha ee aagga hore ee ciidanka. Ururinta bannaanka Föreningshuset. Waxaan ku soo gabagabeyneynaa fiirinta bandhigga Suuqa Doofaarka. 40 karoon qofkiiba. Iyadoo lala kaashanayo Studieförbundet
Luulyo 4 markay tahay 20 galabnimo - 21: 00
MUSIC TOOS AH OO KU JIRTA MASARADA - TIRADA KOOXDEED EE MARAXA KURSIGA 20:00 Ogolaansho ikhtiyaari ah - Waxaad si toos ah ugu siin kartaa fanaanka lacag tabaruc ah isla goobta. SOO DHAWOOW!
Luulyo 5 markay tahay 10 galabnimo - 12: 00	 noq
Luulyo 5 markay tahay 13 galabnimo - 15: 30	 noq
Luulyo 5 markay tahay 14 galabnimo - 15: 30	 noq
Luulyo 5 markay tahay 20 galabnimo - 21: 00
Luulyo 6 markay tahay 10 galabnimo - 13: 00	 noq
Luulyo 6 markay tahay 10 galabnimo - 12: 00	 noq
Luulyo 6 markay tahay 13 galabnimo - 15: 00	 noq
Xagaaga oo ku dheggan kitaabka dushiisa
Waxaan furnaa qolka aqoon-is-weydaarsiga Arbacada saacadaha 13-15. Halkan waxaa ah fursad aad ku abuurto hal-abuurnimo. Rinjiyeynta, farsamada gacanta, kuul, sawir ama laga yaabaa in la ciyaaro VR? Toddobaad kasta, talooyinka buugaagta ayaa la soo saaraa, da' ku habboon
Luulyo 6 markay tahay 13 galabnimo - 15: 30	 noq